I-35 YEQHOSHA LENWELE ELIKHANGELEKILEYO LAMADODA (ISIKHOKELO SE-2021) - IINWELE ZAMADODA
Eyona Iinwele Zamadoda I-35 yeNdawo yokuKhangela kweNwele yamadoda
Izinwele ezisikiweyo ezingasemva ziyaqhubeka ukuba zezinye zezinwele ezithandwa kakhulu ngamadoda. Ngeenwele zanamhlanje ezibuyisiweyo, abafana badibanisa isithunzi esisezantsi okanye esiphakamileyo ngeenwele ezinde ku…
Izinwele ezisikiweyo ezingasemva ziyaqhubeka ukuba zezinye zezinwele ezithandwa kakhulu ngamadoda. Ngonwele olucekeceke lwanamhlanje, abafana badibanisa isithunzi esisezantsi okanye esiphakamileyo kunye neenwele ezinde ngaphezulu ukwenza isitayile nesinwele esipholileyo. Amanye amadoda ade akhethe ukubuyela umva ngendlela ephothiweyo, umahluko wenwele onika umahluko ngakumbi kunokubuyela umva okubuyayo.
Ukuba uthanda iinwele ezibuyisiweyo kumadoda kwaye ufuna ukufunda indlela elungileyo yokuzibuyisela emva iinwele zakho, esi sikhokelo siza kukufundisa yonke into oyifunayo malunga nesitayile. Ukusuka kwindlela yokuphinda ubuye umva ngeenwele ezingqindilili okanye ezigobileyo nokuba kufanelekile ukuba ukhethe i-undercut okanye i-fade haircut yendlela yokwenza isitayile kwaye ujongeke, esi sikhokelo siyakukubeka mva-kunye nomkhwa wamva nje kwihlabathi leenwele zamadoda. Nazi iinwele ezihle kakhulu zangasemva zokufumana lo nyaka!
1Yintoni iNwele eziQhekekileyo?
MbiniUngazifumana njani iinwele eziNtsundu eziBuyileyo
3UngaziThoba njani iinwele eziMva
4Ukwenza isitayile ukuBuya umva
5Izitayile eziKhanyayo eziBalaseleyo
5.2Utyikitye umva Undercut
5.3Kule mihla Slick Back
5.4Ukuphela okuPhakamileyo kubuye umva
5.5Ukuphela okuphantsi kudibene kwakhona
5.6Iinwele eziMde eziKhehliweyo
5.7Mfutshane uSikiwe oNwele
5.8I-Classic Slick Back
5.10Ixesha elide eliKhutshiweyo lokuBuyela umva ngeNtshebe
5.11Ukuphela kweTaper ephantsi ngeTextured Slick Back
5.12Ukuphela kwe-Undercut Fade kunye ne-Textured Slick Back
5.13Umkhwa ongaphantsi woKuphela kweNdlela
5.14Ulusu oluphezulu lweTaper Fade kunye neenwele eziMnyama eziMnyama
5.15Ngaphantsi kwe-Slick Back and Line Up nge-Beard
5.16Ukutyeba okuTyhidiweyo okuTyibilikileyo emva
5.17Ukuphela okuphezulu + Imilo ePhakamileyo + e-Slick Back
5.18I-Brush Back Pomp + iTaper Fade
5.19Ukuhla kweLow Fade + Umgca oPhezulu + oKhazimlayo oTyhilwe ngasemva
5.20Ixesha elide eliKhutshiweyo lokuBuyela umva ngokuPhela
5.21Iinwele eziNtsundu eziKhuselweyo eziMva + ziFile
5.22UkuPhela okuPhezulu okuPhakamileyo + okuTyebileyo okuBhaliweyo okuBuyileyo
Yintoni iNwele eziQhekekileyo?
Ukucheba iinwele ngasemva yenye yeendlela zokuthayipha amacala amafutshane kunye neenwele ezinde eziphezulu. Ifana ne-quiff kunye ne-pompadour, iinwele ezibuyileyo ezibuyileyo kubandakanya ukufaka imveliso (umz. ipomade ) ukunika iinwele zakho ukubukeka okukhazimlayo, okukhazimlayo njengoko zikhutshiwe emva.
Abanye abantu bathanda ukongeza ivolumu okanye ubunjani kwizinwele zabo ezinde, ngelixa abanye bekhetha iinwele zabo ezixineneyo ukuze bahlale phantsi. Iinwele ezimfutshane ezisikiweyo ezinokubuyela umva kunokuba lula ukuzisebenzisa kunye nokuzigcina, kodwa iinwele ezinde zinokubonelela ngeendlela ezahlukeneyo kunye nokuhombisa.
Umva otyhafileyo uyi-retro, osusela kwiinwele ze-greasy ze-1950, kodwa kutshanje uye waba sisitayile esidumileyo emva kwe-hipsters kunye nosaziwayo ababuyise iinwele kwakhona.
Nokuba uneenwele ezimfutshane okanye ezinde ezityibilikileyo, inkangeleko iyonke iklasi kwaye isesikweni, kodwa inomdla kwaye ipholile. Ngokuqinisekileyo yenye yezona zinwele zilungileyo zamadoda namhlanje.
Uzifumana njani iinwele eziNtsundu eziBuyileyo
Uninzi lweenwele zale mihla ezinde ngaphezulu, ezineenwele ezi-3 ukuya kwezi-5 ngeenwele, zijongeka zintle kakhulu emva. Kwaye usenokuzibuza ukuba ingaba unobuso obufanelekileyo kusini na, uhlobo lweenwele, okanye ulusu lweenwele ukuze ubuye umva neenwele.
Ngethamsanqa, konke iimilo zobuso ( ngeenxa zonke , isikwere, okweqanda, njalo njalo) kunye neentlobo zeenwele ( zingqindilili , ebhityile, ngqo, ikheli okanye wavy ) jonga umhle ngokucheba iinwele kwaye indlela oyitayita ngayo ixhomekeke kuwe. Abafana abaneenwele ezijijekileyo okanye ezi-wavy ezigqithisileyo banokufuna ukuzama esinye isitayile kuba iinwele ezingalawulekiyo azizukuphendula kwimveliso ngokulula.
Ngapha koko, ukuchetywa kweenwele okucothayo kuguqukile kwaye kulula, ke eyona nto ibaluleke kakhulu ukuba ube nemveliso ekumgangatho ophezulu yokuthambisa iinwele zakho nayo. Sincoma ukuba ukhethe imveliso eqinileyo yokubamba ukuba uneenwele ezingqindilili nezirhabaxa.
iitattoos ezilungileyo zokuqala zabafana
Okokugqibela, unokufumana ukubuyela umva ngokugqityiweyo ngombala okanye ngokuqaqamba kuxhomekeke ekubeni ipomade yakho iphezulu okanye ikhanya kancinci. Ukulungiselela iinwele zeklasikhi zangasemva, sebenzisa ukubengezela okuphezulu kwe-pomade; Ngaphandle koko, i-matte pomade, i-wax okanye udongwe ilungele ukugqitywa kwendalo.
Okokugqibela, abafana baya kufuna ikama esemgangathweni kunye nokomisa iinwele kwisitayile seenwele zabo ezisikiweyo. Kulabo baneenwele ezi-wavy, ukuvuthela ukomisa iinwele zakho kunye nemveliso kuyo kunokunceda inkqubo yokuthambisa.
Kuxhomekeka ekubeni iinwele zakho zisabela njani kwimveliso, unokufuna i-hairspray ukuze ulawule iinwele ezinqabileyo. Ukukhulula, ukubuyela umva ngokwendalo, sebenzisa nje ukukhanya okulula kunye nekama.
UngaziThoba njani iinwele eziMva
Ukuba uyazithanda iinwele kwaye ufuna ukufunda indlela yokufumana iinwele ezibuyileyo , ukuloba iinwele akunzima njengoko ucinga. Kulabo baneenwele ezithe nkqo, inkqubo ithe ngqo; kodwa iinwele zakho eziqinileyo nezityebileyo, kokukhona kunokuba nzima kakhulu.
Ukuba uneenwele ezijijekileyo kodwa ufuna ngenene ukuzama isitayile esidibeneyo, ukulungisa iinwele zakho kuqala kunokukunceda ukuba ufezekise ukubukeka okucekeceke okufunekayo kwikama yentloko. Ngaphandle koko, ukufumana iinwele ezingqindilili ukuze ubuye umva kuko konke malunga nokusebenza kwenye ipomade kunye nokudibanisa iinwele zakho kude kube kubhalwe ngendlela oyifunayo.
Ukufumana iinkcukacha ngeyona ndlela ifanelekileyo yokufumana iinwele zakho zibuyele umva, landela ezi zikhokelo.
Qalisa ngetawuli iinwele ezomileyo ezisemanzi kancinci. Oku kuyakuqinisekisa ukuba iinwele zakho ziyasabela kwisitayile kodwa zincede ukubamba imveliso yakho yeenwele.
Scoop isixa esincinci se-pomade kwaye usebenzise kuzo zonke iinwele zakho. Sebenzisa okungaphantsi ekuqaleni luluvo olulungileyo, njengoko unokuhlala ukongeza ezinye iipomade kamva. Kwakhona, imveliso engaphezulu iya kwenza ukubukeka okuthe tye, okukhazimlayo ngelixa incinci iya kugcina iinwele zakho zibhalwe kunye nomthamo othile.
Emva koko, zama iinwele zakho emva. Qala phezulu ebunzini lakho kwaye uhambise ikama ngasemva kwentloko yakho kwisindululo esinye esigudileyo.
Kwizinwele ezijiyileyo okanye ezomeleleyo, vuthele ngomqolo umva xa ukama. Oku kuya kunceda ukunika isitayela ngakumbi.
Faka isicelo se-hairspray ukuba kunyanzelekile ukulawula naziphi na iinwele ezilahlekileyo.
Ukwenza isitayile ukuBuya umva
Ukuvavanywa ngenkqubo yesitayile kunokuba yimfuneko ukuba iinwele zakho zigobile kakhulu okanye zishinyene. Umzekelo, zikho ezinye iindlela ezimbalwa zokudibanisa iinwele ezishinyeneyo. Ukongeza imveliso ngakumbi emva kokudibanisa kunokunceda ukunika ukubamba ngakumbi kwisitayile, kwaye ukudibanisa imini yonke yindlela entle yokugcina iinwele ezihlelileyo ezisemva endaweni.
izitayela zokucheba zendoda
Ekugqibeleni, ukubuyela emva okucekeceke kunye nokucheba iinwele zilula kodwa zakudala, kubenza babe zezinwele ezifanelekileyo kubafana abangafuni kuchitha iiyure bezilungisa iinwele zabo.
Izitayile eziKhanyayo eziBalaseleyo
Ukuxabisa ukuguquguquka okugcweleyo kunye nobuhle be-retro yeenwele ezihlehliweyo, jonga kwigalari yezona ndlela zintle zibuyileyo. Senze iindidi ezininzi ezahlukeneyo zeenwele ezisemva kangangoko kunokwenzeka, ke ukuba unengxaki yokuphinda ubuye umva okanye iinwele ezigobileyo okanye ungabinakho ukwenza isigqibo phakathi kwe-low or high fade slick back, uyakufumana imizekelo emihle apha ngezantsi .
Kule mihla Slick Back
Ukuphela okuPhakamileyo kubuye umva
Ukuphela okuphantsi kubuyela umva
Iinwele eziMde eziKhehliweyo
Mfutshane uSikiwe oNwele
I-Classic Slick Back
Ixesha elide eliKhutshiweyo lokuBuyela umva ngeNtshebe
Ukuphela kweTaper ephantsi ngeTextured Slick Back
Ukuphela kwe-Undercut Fade kunye ne-Textured Slick Back
Ulusu oluphezulu lweTaper Fade kunye neenwele eziMnyama eziMnyama
Ngaphantsi kwe-Slick Back and Line Up nge-Beard
Ukutyeba okuTyhidiweyo okuTyibilikileyo emva
Ukuphela okuphezulu + Imilo ePhakamileyo + e-Slick Back
I-Brush Back Pomp + iTaper Fade
Ukuhla kweLow Fade + Umgca oPhezulu + oKhazimlayo oTyhilwe ngasemva
Ixesha elide eliKhutshiweyo lokuBuyela umva ngokuPhela
Iinwele eziNtsundu eziKhuselweyo eziMva + ziFile
UkuPhela okuPhezulu okuPhakamileyo + okuTyebileyo okuBhaliweyo okuBuyileyo
iitattoos zengalo zamadoda
indlu intsingiselo yokuvumisa ngeenkwenkwezi
Iinwele ze-mohawk zabantwana
iinwele ezimfutshane zamakhwenkwe abantwana
ilanga, inyanga, ukuphuma kwentsingiselo
indlela yokwenza iinwele zakho amadoda